ED Andriamalala – Blaogin'i Voniary
Étiquette : ED Andriamalala
Mpankafy « Question Pour Un Champion », mpamaky boky vahiny betsaka nefa tsy manary ny kolontsaina Malagasy. Sady manoratra amin’ny teny malagasy izy no manoratra amin’ny teny frantsay. Nivoaka tamin’ny 16 Desambra teo ny boky malagasy faharoa nosoratany : « Lisy Mianjoria ».Moa va tsy tanteraka ao aminy ilay teny filamatra hoe « Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko » !... Lire la Suite →
“ Lalàna no nanapotehina tsikelikely ny maha-Malagasy. Tsy maintsy lalàna ihany koa no hamerenana ny zo aman-kasiny, ary lalan-tokana no hany izorana ho amin’izany: FANAGASIANA.” P.59 Famintinana: Nanomboka tamin’ny fanjanahan-tany dia nosimbain’ny frantsay ny maha-firenena an’i Madagasikara: ny satam-panjakana, ny fahefana fa indrindra ny tanindrazana sy ny firenena ary ny fahaleovantena. Hatramin’izao aza dia mbola misy... Lire la Suite →